***ကြိုး*** | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » ***ကြိုး***	10
Posted by maung khinmin on Jul 22, 2012 in Creative Writing, Poetry | 10 comments
မမြင်နိုင် တဲ့ ကြိုးနဲ့….
ရိုးရိုးလေး ချည်ခဲ့မိ တာပါ
ငါ့ … မိုနာလီဇာ လေးရေ…၊
လျှို့ ဝှက်ချက် ရှာချင်တဲ့ သူတော့မဟုတ်ရပါဘူး
လေးနက်မှု မှာ အိပ်မက်ကွန်ယက် ကို
ဆွဲဆန့် …. ဖြန့် ကျက် လိုက်မိတာလေ …၊
ဒီလို နဲ့ …..
ဂမ္ဘီရဆန်ဆန် အပြုံး ကို ခေါင်းအုံးလို့ 
အလိုလိုက် ခဲ့မိတဲ့ နှလုံသား
သူ့ နေရာ သူ …. ပြန်ထားလို့..
About maung khinmin
maung khinmin has written 85 post in this blog.
View all posts by maung khinmin →	Blog
ညလေး says: မမြင်ရတဲ့ကြိုးရဲ. ချည်နှောင်မှုက…….ပိုပြီးခိုင်မြဲနက်နဲကြောင်း
ဇောက် ထိုး says: အပြုံးကိုခေါင်းအုံးမိတော့လဲ… ခေါင်းနဲ့အုံးတားနဲ့ဆောင့်မိတာပေ့ါနော်…. ဒီတော့လဲ နှလုံးသားက ရွှေ့သွား တာနေမှာပေါ့…
ရွှေသွားတော့လဲ….သူ့နေရာသူ ပြန်ရောက်ဖို့က ခဲယဉ်းမှာပါ….
အကြောလေးလွဲသွားရင်ကို နေရာမှန်အောင် အတော်အနာခံပြီးလုပ်ရတာ…. ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4577
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကြိုးထဲမှာတော့
အဲ့ဒီကြိုးက အဆိုးဆုံး …
အားပေးသွားပါတယ် မောင်ခင်မင်ရေ ..
ကဗျာလေးက အရမ်းကောင်းသဗျို့ ..
htet way says: ပြဿနာပဲဆရာရေ့
ကြိုးဆိုတာ ရစ်ပတ်လွယ်တယ်ဆိုပေမယ့် ညှိရင်တော့ အင်…
မောင်ပေ says: မိန်းခေးရယ်
marblecommet says: ဆရာခင်က
mamanoyar says: နှလုံးသားကို သူ့နေရာသူပြန်ထားလို့မရရင်
etone says: အရှက်နဲ့သိက္ခာကို
ခရီးဆက်ခဲ့ရတယ် ။ လူသာလဲချင်လဲမယ်
မမြဲလို့ မဖြစ်ဘူးပဲ …. ။
အရေးကြီးပါတယ် …. ခွိခွိ :P :P :P (အားဖြည့်ပေးတာပါ …. အပျော်လေးနှောပြီးတော့ပေါ့ …. ) :D :D :D
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ဒီကြိုးပဲဗျ ဖြတ်ရခက်တာ…
မြင်ရတာလဲ ဒီကြိုးပဲ…..(မြင်တော့ မမြင်ရဘူးပေါ့ကွယ် စကားအရပြောလိုက်တာ..ဟဲ)
ရစ်ပတ်အောင် သူတမင်ဆွဲဆောင်တာလဲ မဟုတ်ဘူး…
ငါကိုယ်တိုင်က ရိုးရိုးလေး ချည်ထားခဲ့မိတဲ့…
ဟိဟိ …ကဗျာက မိုက်တယ်ဗျ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 73
tharli kar says: ကြိုးတဲ့……..
(ကဗျာများနှင့် မွေ့လျော်သော ဆရာမောင်ခင်မင်…..အား..အလေးပြုပါ၏)